FAQs - Yixing Guta Jitai Electronics Co, Ltd.
Mitengo yedu inosiyana zvinoenderana nezvinhu zvinoshandiswa, kuomarara kwekugadzirwa / kugadzirwa, uye huwandu. Sezvo ruzhinji rwezvigadzirwa zvedu zvakagadziriswa, isu tinoshanda pamwe nevatengi vanodhirowa kupa tsika makotesheni nekukurumidza sezvazvinogona.
Kwete, hapana hushoma hwehuwandu hweodha. Nekudaro, sezvo ruzhinji rwezvigadzirwa zvedu zvakagadziriswa, panowanzo kuve nemutero wekushandisa unosanganisirwa nekugadzirwa kwechimwe chigadzirwa chigadzirwa, semuenzaniso tsika dzevhu dzinofanira kuumbwa nezvimwe. Nezve zvidiki zvakanyanya zvekuodha, izvi zvinogona kuratidza mutengo-unorambidza kune vamwe vatengi.
Zvichida kutaura, 6-8 mavhiki zvinoenderana nekuoma kweprojekti
Parizvino isu tinongogamuchira kufambiswa kwebhangi. Muzhinji tinokumbira 30% T / T pasi muripo pakuiswa kweodha, neakasara 70% inofanirwa pakutumirwa.
Hongu, isu tinoshandisa mhando yepamusoro yekutengesa kavha. Isu tinoshandisa zvakare hunyanzvi kurongedza zvinhu zvine njodzi uye yakasimbiswa inotonhora yekuchengetedza vafambi kune tembiricha inonzwika zvinhu. Nyanzvi kurongedza uye zvisiri-zvakajairwa kurongedza zvinodiwa zvinogona kukonzera imwezve muripo.
Mari yekutumira inosiyana zvichienderana nekuti vatengi vekambani vanosarudza vanosarudza. Isu tinoshanda nevose vakuru vekunze uye vekunze vanotakura. Ndapota taura nesu kuti uwane mamwe mashoko.